WAA MAXAY SABABTA DHULKA DUSHIISA KU DABOOLAY UBAXYADA CAD. SABABAHA DHAADHEER EE DHERYAHA, DHEXDA EE DHULKA IYO UR XUN KA SOO CARRADA. DAAWEYNTA MUSQUSHA - MAQAALLO
Waa maxay sababta dhulku u daboolan yahay ubaxyada caddaanka ah, waxaa jiri kara caaryo, midheys iyo ur aan fiicneyn oo dheriga
Ka bilowga beeralayda ubaxa markiiba ama wajahaan dhibaatada muuqaalka lakabka lakabka ah ee dusha sare ee dheriga, iyo badanaaba tani waxay keenaysaa dareen walaac ah dhirta gudaha. Dhab ahaantii, xaaladdan ciidda ma aha dhibaato halis ah oo si weyn u waxyeeleyn karta geedka, laakiin arrimuhu waa halis. Maanta, waxaan si faahfaahsan u fiirin doonaa waxyaabaha keena lakab cad iyo falanqeyn sida loo xalliyo dhibaatadan iyo waxa la samaynayo mustaqbalka si looga hortago xaalad sidan oo kale ah substrate.
Dhibaatooyinka Mawduuca Goobta
Badanaa, ubaxyada gudaha ayaa u baaba'ay sababtoo ah daryeeyn aan haboonayn, taas oo saameeyaa substrate waxayna sidaas u yeeleysaa xididdada geedka.
Cirifka cad ee dusha sare
Marka substrate uu cadaan ku jiro ubax, taasi waa calaamad muujinaysa in dhirta aan si haboon loo daryeelin, sidaas daraadeed marka hore waa lagama maarmaan in la aqoonsado waxyaabaha keena dhibaatada. Sababaha
Waxaa jira dhowr sababood oo ah muuqaalka muuqaalka substrate-ka cad, oo ay ka mid yihiin:
Waraabin badan - Saliiduhu waxay ka muuqdaan dhulka dushiisa iyadoo u sabab u ah uumiga firfircoon ee biyaha.
Waraabin aan joogto ahayn - Saliidku waxay ku ururi karaan dusha ciidda. Xaaladdan oo kale, lakabka hoose ee carrada ee dheriga waa la baddelay, iyo biyaha oo keliya qoyaan lakabka sare ee substrate, taas oo keenta cillad cad oo muuqata.
Qoyaan aan hawo lahayn waxay keentaa dareeraha qulqulaya ee uumiga uumiga ah ee ku dhacay dufanka ubaxa - xaaladdan, cusbadu waxay si firfircoon ugu ururaan lakabka sare ee substrate. Carrabku wuxuu noqdaa mid salineesan, taas oo saameeysa horumarka caadiga ah ee dhirta.
Miisaanka shiidan. Haddii ubaxyada la quudiyo marar badan ama feejignaanta dharka dhaadheer waa mid aad u sareysa, substrate ayaa laga yaabaa inay ku daboolaan qolof ah cad.
Substrate aan habooneyn oo loo isticmaalo dhirta dhirta kobcaya. Ku iibso dukaanka, fiiri calaamadda. Waxaa jira xaalado ah iibsashada substrate guud oo loo isticmaalo geedo sii kordhaya. Carrabkani waxa si gaar ah loola dhaqmaa dheellitooyin badan si loo kobciyo koritaanka degdegga ah ee abuurka. Marka la eego, ubaxyada cad waxay bilaabayaan inay sameeyaan dusha sare, tani waxay saamayn ku yeelan kartaa caafimaadka ubaxa gudaha.
Adoo aan u hoggaansameynin saamiga dheriga dheriga ee cabbirka geedka. Sida aad ogtahay, beeralayda khibrada leh waxay ku talinayaan inay doortaan qiyaasta dheriga ah si ay u ahaato wax yar oo ka weyn dhirta lagu beeray. Haddii aad dayacdo qaanuunkan oo aad iibsato dheri weyn, ku shub badan substrate halkaas oo ku beeri warshad yar, ka dibna xididdadiisa ma awoodi doonaan in ay nuugaan qoyaan in lagu dabaqi doono ciidda. Sidaa darteed, leh uumi firfircoon ee dareeraha, dusha sare si degdeg ah ku daboolay ubaxyada cad.
Waxaa jira fursado dhowr ah oo lagula tacaalayo ubaxyada cad ee carrada ee dheryaha ubaxa. Waxaad ubaahan tahay inaad dooratid sida ugu haboon ee adiga kugu salaysan sida ay sabab u tahay dhibaatada.
At guriga, waa mid waxtar leh si ay u koraan chlorophytum, aloe, laurel, ficus, kalanchoe, chrysanthemum, cactus, pelargonium, sansevieriya.
Si aad u dhajiso on substrate sameeyay si tartiib tartiib ah oo ku dhowaad aan la fahmi karin, waxaa lagula talinayaa in ay ku rushaysaa leh dhoobo on top.
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo xaqiiqda ah in waqti ka dib lacagtii caddaanka ahayd ee xitaa ay ku dhici karto dhoobka dhererka leh: kiiskan, dheecaanka sare waxaa laga saaraa, si fiican u maydhaa oo dib ugu soo celiyaa dheriga.
Waxaa jira xulasho kale oo loola dagaallamo dhibaatada - isticmaalka qulqulka webiga. Waxay ku seexdaan xagga sare ee substrate iyo si fiican u ciidda ciidda leh ul alwaax ah. Nidaamkan noocan oo kale ah ma aha oo kaliya inuu iska ilaaliyo muuqaalka ubaxyada madow ee ku jira substrate, laakiin sidoo kale waxay faa'iido u leeyihiin xididada.
Habka ugu dhaqsaha badan uguna fududi waa in laga saaro lakabka ugu sarreeya ee substrate leh dhulka la caddeeyey, iyo halkii boodh cusub oo la shubay. Haddii aad go'aansatay in sababta muuqaalka ubaxyada cad ee dhulka ay tahay qallajinta hawada qolka, waxaa lagu talinayaa in lagu dhajiyo dheriga dhoobo, kaas oo si joogto ah loogu buufiyo biyo ka soo dhalaalaya buufin. Sidan ayaad u abuuri kartaa qoyaanka lagama maarmaanka u ah dheriga wuxuuna ka hortagayaa dhibaatada ka timaadda.
Khudaarta caleenta ubaxyada
Badanaa dhacdooyinka huurada caddaanka ah waxay la xiriirtaa sababaha bayoolojiga - horumarinta xayawaanka fungal iyo muuqaalka koofida ee substrate. Xaaladdani waxay ka hortagtaa daryeelka aan habboonayn ee ubaxa ama saameynta waxyaabaha kale ee deegaanka ee xun.
Ma taqaanaa? Maaddada ayaa ka mid ah noolaha ugu caansan ee adduunka: waxay u muuqatay in ka badan 200 milyan oo sano ka hor. Inta lagu jiro jiritaanka, caaryadu waxay awood u laheyd inay la qabsadaan xaaladaha dabiiciga ah ee ugu adag waxayna ku noolaan karaan maaddooyinka, goobaha raadiyaha iyo meelaha banaan.
Badanaa waa caaryada ugu horeysa ee laga helo meesha carrada iyo dheriga ay soo galaan. Saameynta isdhexgalkaan waxaa calaamad u ah ubaxyo cadcad ama bunni ah oo ku faafaya xawaare weyn. Haddii aadan wax ka qaban dhibaatadaas, hawadu waxay ku dhegtay tiro badan oo ah fangas fungal ah, iyo ka dib markii ay si dhakhso ah u kobciso koloniyada fangaska, iyo ubax u dhinto.
Waxaan kugula talineynaa inaad ogaatid ubaxyada ugu fiican ee dheriyada.
Xaaladaha badankood, dhacdada caaryada dheriga waa natiijo saameyn ku leh substrate waxkasta oo xun.
Xaaladdan, waxaa jira dhowr sababood oo ah horumarinta caaryada:
Waraabinta xad dhaafka ah iyo istaabashada dareeraha ee substrate ah. Ayadoo ay sabab u tahay qulqulka joogtada ah, kalluunka fungus ayaa si dhakhso ah u kobciya, iyo caaryadu waa la sameeyay.
Heerkulka hoose iyo qoyaanka sare ee qolka waa jawi wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta fungus.
Si joogto ah u waraabiyo ciidda biyo qabow.
Diiditaanka ama isticmaalka habboon ee dheecaanku waxay keenaysaa in xannibaadaha godadka ee dheriga ah iyo kicinta joojinta biyaha ee dhulka, taas oo sababa faafidda fangaska.
Isticmaalka caaryada wasakheysan ee leh caaryar dhirta lagu beeray ubax.
Waa muhiim! Badanaa fungus waxay ku dhacdaa meelaha hawada liita ee xilliga gu'ga iyo dayrta, marka qoyaanka uu sarreeyo, qolku waa qabow, iyo uumiga qoyaanka ee ciidda waa yar yahay.
Inta badan sababaha koritaanka caaga ee dheriga waa waraabin xad dhaaf ah iyo qoyaan, sidaas darteed haddii fungal lesions la ogaado substrate, waxaa ugu horeysa lagama maarmaan in la saxo jadwalka waraabka. Tani, marxaladda biyaha lagu yareeyo waa la dhimayaa, mugga dareeraha waa la dhimay.
Baro sida loo doorto dhir daboolan qolka jiifka.
Haddii ubaxa u baahan yahay waraabin nadiif ah, laakiin waa lagama maarmaan, ka dib markii qoyaan kasta ee ciidda, si ay u jajabaan substrate leh ul alwaax ah, si qoto dheer ugu sareeya, gaaraya dheecaan.
Marka uu dabacsan yahay waa lagama maarmaan in si taxadar leh u dhaqmaan si aaney u waxyeeleynin xididada.
Si looga ilaaliyo ubaxa waxyeelada iyo ka saarista caaryada dheriga, waxaa lagu talinayaa in la sameeyo falalka soo socda:
Ka jar qaybta sare ee substrate ee ay saameeyeen fungus. Waa lagama maarmaan in si dhaqso ah loo sameeyo mashiinkaas, sida ugu dhakhsaha badan ee qiiqa koowaad ee fangaska caaga la helay. Haddii aad wax yar sugto ka saarista, infekshanku wuxuu bilaabi doonaa inuu galo lakabka gudaha ee carrada, taasoo keeni doonta warshad si loo jeexo oo u dhinto.
Ka daawee lakabada hoose ee substrate leh biyaha acidic. Sidaa darteed, shaaha oo ah shaaha ayaa lagu kala diraa galaas biyo ah. Thanks to dheecaanka this, spores of fungus ma sii badin doono iyo ugu dhakhsaha badan u dhiman doonaa.
Qaybta maqan ee dusha sare ee dheriga waa in la buuxiyaa ciid cusub, kaas oo aad ku dari karto walxaha bakteeriyada, ee loogu talagalay si looga hortago fangaska. Si arrintan loo sameeyo, dhuxusha ku habboon, lagu burburiyo qaybo yaryar, ama sphagnum.
Ka dib markii la marsado, substrate ayaa la waraabiyey xal "Fundazol" (1 l oo biyo ah iyo 2 g oo badeeco ah). Haddii cayayaanka uu ku dhuftey ubaxa, waxaa sidoo kale lagu daaweeyaa xal buufinta.
Daawee lakabka substrate ee hoose leh citric acid.
Haddii aad aragto in caaryadu ay ku faafaan lakabka hoose ee substrate, waxaad isku dayi kartaa inaad ku badbaadiso ubaxa adoo u bedelaya. Si arrintan loo sameeyo, si taxadar leh uga saari dheriga, si taxadar leh u nadiifiso xididada ka soo substrate ah. Marka xigta, ku beeri ubaxa sida caadiga ah.
Qaar ka mid ah beeralayda ayaa isticmaala kiimikooyin loogu talagalay inay ka hortagaan caaryaal, macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iyaga waxaa laga heli karaa dukaamo khaas ah.
Waa muhiim! Marka la doorto miisaaniyadaas, waa lagama maarmaan in si taxadar leh loo akhriyo calaamadda badeecadda si loo hubiyo in aysan waxyeelaynin geedka.
Badanaa ubaxyada gudaha waxaa lagu saameeyaa bartamaha, kuwaas oo u muuqda sababo aan loo hoggaansamin xeerarka daryeelka. Kuwa ugu caansan waa poduras iyo stsiaridy - midges ubax, taas oo xoogga saaraya labada ciidda iyo qaybta cagaaran ee warshadda. Wax dhib ah uma geysanayaan ubaxa, laakiin dirxigooduna waxay sababi karaan waxyeelo daran - saameyn ku yeelan kobaca, waxay horseedi doontaa dildilaaca caleemaha iyo ubaxa. Sababaha
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee muuqaalka kore:
Waraabinta xad dhaafka ah ee dhirta. Ciidda joogtada ah ee ciidda ah waa meel fiican oo loogu talagalay waxqabadka muhiimka ah iyo dhalashada ee bartamaha.
Khashinka dhulkii la helay ee loogu talagalay geedaha beerista.
Ku waraabinta ubax leh dareerayaal aan loogu talagalin ujeedadaas. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah hooyooyinka ayaa doorbida inay dhoobaan dhirta dhoobada, iyagoo mararka qaarkood noqda waxyeellada cayayaanka.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka ogaato 15 dhirta ugu quruxda badan qurxinta gurigaaga.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo wax ku ool ah oo wax ka qaban kara cayayaanka. Kuwaas waxaa ka mid ah: jirka, kiimikaad iyo dad.
Hababka jirka ee xakamaynta cayayaanka waxaa ka mid ah:
ku beddelashada ciidda cusub. Si arrintan loo sameeyo, ubaxa waxaa si taxadar leh looga saaraa dheriga, xididdada waxaa lagu nadiifiyey ciidda wasakhaysan, oo lagu beddelay habka caadiga ah, iyadoo la tixgelinayo dhamaan sifooyinka geedka;
Waa muhiim! Dheriga uu ubaxa ku yaalay waa inuu si fiican u maydhaa biyo saabuun ah oo la raaciyaa biyo karkaraya.
qayb ka mid ah beddelka substrate. Haddii aysan jirin duqsiyo badan oo boodh ah, waad ka saari kartaa iyaga oo bedelaya meelaha hoostiisa. Si arrintan loo sameeyo, waxaa si taxadar leh loo xoqaa oo la tuuraa, hannaanka ayaa ka buuxsamaya substrate cusub.
Kiimikooyinka lagu burburinayo cayayaanka waxaa lagu iibiyaa dukaamo khaas ah. Si aad u isticmaasho qalabkan waa mid sahlan, waxayna si dhakhso ah ula qabsadaan hawsha. Daawooyinka noocan ah waxaa lagu soo bandhigaa "Muhoed", "Fufanona", "Agravertina", "Fitoverma", "Aktar". Waa lagama maarmaan in la isticmaalo marka loo eego tilmaamaha lagu calaamadiyay calaamadda.
Inta badan, dhirta indoor waxaa lagu soo weeraray cayayaanka. Baro sida looga takhalusi karo cayayaanka, cayayaanka iyo caarada caarada.
Ka mid ah daaweynta dadweynaha ee dagaalka ka dhan ah isticmaalka khudradda waa kala duwan:
xal of daloolka potassium. Si arrintan loo sameeyo, qoyaan kariimka dhalooyinka ee litir oo biyo ah - on caarada mindi, si ay dareeraha u noqdaan hoos hooska casaan fudud. Biyaha isku dar ah ubax leh ubax marmar 5 maalmood oo si joogto ah ugu buufin dhalada buufinta;
macnihiisu waa mid habaysan. Kuwaas waxaa ka mid ah tubaakada, dambaska qoryaha, toonta ama dufanka liinta, kuwaas oo loo qaybiyo dusha sare ee substrate. Taas macnaheedu waxaa weeye urka oo ka baqaya duqsiyada madow oo ha u oggolaan inay si caadi ah u socdaan.
VIDEO: SIDA AAD KA HELI KARTA KAALMADA KA QAADASHADA
Urta aan fiicnayn ee ka soo baxa ciidda dufanka ubaxa
Mararka qaar waxay dhacdaa in carrada dufku uu bilaabo inuu naas nuujiyo - tani waa calaamad muujinaysa subagga iyo bilawga geeddi-socodka ah ee ka soo baxa nidaamka xididka ee ubaxa. Dhibaatadani waxay si toos ah ula xiriirtaa daryeelka aan habooneyn, iyo si loo badbaadiyo dhirta, waa lagama maarmaan in si deg-deg ah wax looga qabto, sida ugu dhakhsaha badan marka aad aragto calaamadaha ugu horreeya ee daaqada.
Ka mid ah sababaha ugu badan ee acidification ee ciidda waa sida soo socota:
Qalitaanka tallaalka dhirta laga bilaabo substrate taas oo ahayd markii aad ka iibsatay dukaanka ubaxa. Carrabkani waa mid aad u qoyan, waxaana badanaa keena warshad si loo yiraahdo.
Kobaca ee ciidda dhoobo culus, taas oo aan ku habboon tahay warshad this iyo kiciso ay qoyaan.
Waraabin joogto ah oo joogto ah, gaar ahaan xilliga jiilaalka, ama guuritaanka ubaxa meel mugdi ah, qabow.
Meelo dheecaan ah ama godo dheecaan leh.
Kala duwanaanshaha qiyaasta dheriga iyo cabbirka dhirta.
Sababtoo ah acidification ee ciidda, khatarta ah burburinta dhamaystiran ee warshadda waa mid aad u sarreeya, sidaas darteed, si loo badbaadiyo, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro ubax ka dheriga iyo eegaa nidaamka xididka. Haddii xididada aan la waxyeeleynin, ka dibna kubada dhulka ayaa lagu duudduubay wargeyska ama waxyaabo gaar ah oo wax lagu nuugayo dhowr lakab. Warshad waxaa la dhigayaa meel kulul, oo ka fog qorraxda tooska ah.
Fiiri sifooyinka soo kordhaya canabkiinna gudaha ah.
Mar had iyo jeer isbaddal maaddada qoyaanka-nuugista illaa dareerka ka baxo inuu ka soo baxo dhulka. Perlite for dhirta Ka dib markii clod la qalajiyey, waxaa lagu rusheeyey perlite iyo beeray dheri jir ah. Waqti ka dib markii la beero, waxaa lagu talinayaa in la dabciyo ciidda si ay u siiso helitaanka hawada nidaamka xididka geedka.
Haddii ka dib markaad qaadato dhoobo dhuuban, dhirta xidid waa la helay, waa inaad ku wareejisaa inaad gawracato warshadda ilaa substrate cusub. Si arrintan loo sameeyo, xididdada warshadda sida ugu macquulsan ee loo nadiifiyo substrate jir ah, ka gooyay xididdada lowska leh iyo daweynta meesha la jaray qoryaha la jajabiyey ama dhuxul firfircoon. Next, geedka waxaa lagu beeray dhul cusub.
Ma taqaanaa? Takhasusay ubax Dhuxusha waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii biyo-daadi ah - waxay awood u leedahay in ay soo nuugo cusbada kaasoo badbaadin doona ciidda laga bilaabo daaqada. Ku ururinta dheecaanka xad-dhaafka ah ee isku-dhafan, dhuxusha ayaa ka hortagaya qulqul-darrada, iyo maqnaan la'aanta waraabinta waxay siinaysaa qoyaan geedka.
Si aan u dhicin dhirta si ay u tijaabiso qaabka fangaska caaga ah, duqsiyo madow ama dufin ee substrate, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco xeerarka qaar ka mid ah daryeelka carrada ee dheryaha ubaxa oo si joogta ah looga hortago ka hortagga.
Tallaabooyin ka hortag ah waxaa ka mid ah:
Si joogto ah, laakiin aan ahayn waraabin xad dhaaf ah.
Dooro dhar sida ay u le'eg tahay xajmiga dhirta.
Biyo fiican, taas oo la xushay sida ay le'eg tahay godadka dheriga, si aanay u joojin.
Nadiifinta joogtada ah ee ciidda si caadi ah u helidda ogsijiinta iyo ka daadinta dheecaanka ilaa lakabyada hoose ee substrate.
Daaweynta musqusha leh xal daciif ah ee kaneecada 1 jeer bishiiba.
Diyaarinta nidaamsan ee qolka ay ku jiraan dhirta, ilaalinta heerkulka habboon iyo qoyaanka.
Isticmaalka carrada tayada, oo lagu iibiyo dukaamo khaas ah oo lagu duubo bacaha warshadaha.
Naasnuujinta ciidda la iibsaday ka hor beerashada ubax leh kermiska.
Sidaa darteed, muuqaalka koofiyadaha, patina cad, urta xun ama dhexda ku jira ciidda dheriyada ubaxa waxay si toos ah ula xiriirtaa daryeelka aan habboonayn ee dhirta. Si looga fogaado cawaaqib xun, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo waxyaabaha gaarka ah ee daryeelka ubaxa iyo in la ilaaliyo tallaabooyinka ka hortagga, iyo haddii ay dhacdo dhibaato, si dhaqso ah u dhaqso si aad u ilaaliso warshad caafimaad leh.
Waxaan haystaa biyo adag. Sidaa daraadeed, marmar waxaa jira caddeyn cad oo dusha sare ah ee dhulka iyo dheriga - si fiican, qof kastaa wuu fahmaa meesha dushiisa. Sidaas darteed, haddii aad u kala firdhiso dhagax yar oo dhagax la jajabiyey dusha sare, ma jiraan wax weerar ah. Waxay u egtahay nooca shaandhada uu u shaqeeyo ...
Miyuu qofku u adeegsan karaa ...